Blog Page မှာ ပုံနှင့် ဗွီဒီယိုဖိုင်များတင်ခြင်း - မောငျပေါကျ ( Maung Pauk )
Home BLOG Blog Page မှာ ပုံနှင့် ဗွီဒီယိုဖိုင်များတင်ခြင်း
Maung Pauk at 4:17:00 PM BLOG,
မောင်ဥာဏ်သူ: အစ်ကိုပေါက် ကျွန်တော်ကို တစ်ခုလောက်ကူညီပါဦး ကျွန်တော်ကခုမှ ဘလော့တစ်ခု ထောင်ပါတယ် အဲဒါ Post တင်ရင် ပုံပါတွဲတင်ချင်တာ အဲဒါဘယ်လိုတင်ရသလဲ ရှင်းပြပါဦး လေးစားလျှက်..
မောင်ဥာဏ်သူအပါအ၀င် ဘလော့ကို ခုမှ စတင်လေ့လာသူတွေအတွက် ဗဟုသုတအဖြစ် အကျဉ်းရှင်းပြတင်ပေးလိုက်ပါတယ်..
ဘလော့ရဲ့ ပို့စ်ရေးတဲ့စာမျက်နှာထဲမှာ ကိုတင်ချင်တဲ့ နေရာမှာ ကလစ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြီး Formatting Bar က Insert Image ဆိုတာကို နှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်..
ဒါဆိုရင်တော့ ဒီလို Selectafile ဆိုတဲ့ဘောက်တစ်ခုကျလာပါမယ်..
ဒီဘောက်ထဲမှာ ဘယ်ဘက်အခြမ်းက Upload ဆိုတာက ကွန်ပျူတာက ပုံကို တင်ဖို့ပါ.. အဲဒါကိုနှိပ်ထားရင် ညာဘက်မှာ Choose Files ဆိုတာပေါ်ပါတယ်.. Choose Files ကိုနှိပ်ရင် ဘောက်တစ်ခုထွက်လာပြီး အဲဒီဘောက်ထဲမှာ ကိုယ်တင်မယ့် ဓါတ်ပုံရှိရာကိုသွား. တင်မယ့်ဓါတ်ပုံကို တစ်ချက်နှိပ်ပြီး Open ကိုနှိပ်ရပါမယ်..
ခဏနေရင် Selectafile ဆိုတဲ့အကွက်ထဲကို တင်လိုက်တဲ့ဓါတ်ပုံရောက်လာပါပြီ.. ဓါတ်ပုံကို တစ်ချက်နှိပ်ပြီး Add selected ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ရင် Page ထဲကို ဓါတ်ပုံရောက်လာပါပြီ
နောက်တစ်ခုက From this blog ဆိုတာပါ.. ဒါက ဒီဘလော့ထဲမှာ အရင်ကတင်ပြီးသားပုံရှိရင် အဲဒီပုံကိုပဲ သုံးမယ်ဆိုတာကိုပြောတာပါ..
ဒါတွေကို မပြောတော့ပဲ အသုံးများတာကိုပဲပြောပါတော့မယ်..
FromaURL ဆိုတာပါ... ဒါကတော့ အင်တာနက်ပေါ်က ဓါတ်ပုံတွေရဲ့ URL လိပ်စာကို ထည့်ပေးရပါမယ်.. အဲဒါကတော့ Website ပေါ်က ဓါတ်ပုံတွေကို ညာကလစ်ထောက်ပြီး Copy image location ကိုနှိပ် (သို့မဟုတ်) ဓါတ်ပုံကိုနှိပ်လိုက်ပြီး အပေါ် address bar က url ကိုကူးပြီး Paste ချပေးလိုက်ပါ.. ဒါဆိုရင် Selectafile ဆိုတဲ့ဘောက်ထဲကို ဓါတ်ပုံရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်.. ရောက်လာရင်တော့ Add selected ဆိုတာကို နှိပ်ပေးလိုက်ရင် Post ထဲကို ဓါတ်ပုံရောက်လာမှာပါ..
ရောက်လာတဲ့ဓါတ်ပုံကို တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင် ပုံရဲ့အောက်နားလေးမှာ Small-Medium-Large- X-large - Original size ဆိုပြီး ဓါတ်ပုံရဲ့ အရွယ်အစားကို ရွေးလို့ရပါတယ်.. သာမန်အားဖြင့်တော့ Medium ကို ရွေးပေးလေ့ရှိပါတယ်.. အဲဒါနဲ့ တစ်တန်းတည်းပဲ. left-Center-Right တစ်ခုခုကိုနှိပ်ပြီး ဓါတ်ပုံကို ဘယ်လိုထားမလဲဆိုတာကိုရွေးပေးနိုင်ပါတယ်..
2. ဗွီဒီယိုဖိုင်တင်ဖို့ကလည်း ဓါတ်ပုံတင်တာနဲ့ အတူတူပါပဲ.. ခုနက ဓါတ်ပုံတင်ဖို့ရွေးခဲ့တဲ့ Insert Image ဆိုတဲ့ပုံရဲ့ ညာဘက်မှာ Insertavideo ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ရပါမယ်..
ဒါဆိုရင် Selectafile ဆိုတဲ့ဘောက်ကျလာမှာဖြစ်ပါတယ်.. ဓါတ်ပုံတင်ခဲ့သလို ဘယ်ဘက်က Upload ကိုတစ်ချက်ရွေး. ညာဘက်က Chooseavideo to upload ကိုနှိပ် ကိုယ့်ကွန်ပျူတာထဲက Video ဖိုင်ကို ရွေးပြီး Open ကိုနှိပ်ပေးရမှာပါ.. From Youtube ဆိုတာမှာတော့ Youtube က ကိုလိုချင်တဲ့ Video ဖိုင်ရဲ့ URL လင့်ကို ထည့်ပေးလိုက်ရုံပါပဲ.. ပုံမပြတော့ဘူးနှော်.. သဘောပေါက်မှာပါ.. အကျယ်တော့ မရှင်းပြတော့ဘူးဗျာ.. ဒါလေး လုပ်ရင်းနဲ့ သိလာပါလိမ့်မယ်..
အိုက်အောင် September 30, 2013 at 1:25 PM
video တောတင်လို့ရတယ်အကို play လို့မရဘူးဘယ်လို့လုပ်ရမှာလဲပြောပြပါဦး
အိုက်အောင် September 30, 2013 at 1:27 PM
video တောတင်လို့ရတယ်အကို play လို့တောမရဘူးဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲပြောပြပါဦး
အိုက်အောင် September 30, 2013 at 1:28 PM